Isi ihe na-J & S Botanics ihe ịga nke ọma anyị elu technology. Kemgbe ụlọ ọrụ e guzobere, anyị na-pụta ìhè na onwe ha nnyocha na ọhụrụ. Anyị goro Dr. Paride si Italy dị ka anyị bụ isi na ọkà mmụta sayensị na wuru a 5 òtù R & D otu ya gburugburu. N'oge gara aga ọtụtụ afọ, nke a otu azụlitewo a iri na abuo nke ọhụrụ ngwaahịa na-edozi ọtụtụ isi oru mbipụta ebuli anyị mmepụta usoro. Onyinye ha na, anyị ụlọ ọrụ guzo na ndị ụlọ ọrụ ma domestically na ụwa. Anyị nwere 7 nchọpụta Kemịkalụ nke na-ekpuchi akụkụ dị iche iche nke mmịpụta teknụzụ. Teknụzụ ndị a na-enyere anyị na-emepụta extracts na elu-adị ọcha, elu ndu ọrụ, ala fọduru ala oriri ike.
Ke adianade do, J & S Botanics ka burugodị anyị na-eme nnyocha na ọkaibe laabu akụrụngwa. Anyị nnyocha center na-onwem na obere na-ajụ-sized mmịpụta tank, a rotary evaporator, obere na-ajụ-sized chromatography kọlụm, * Tụkwasị concentrator, obere agụụ ihicha igwe na Obere ịgba akọrọ ụlọ elu, wdg All mmepụta Filiks ga-anwale ma mma na laabu tupu uka mmepụta ke mmepụta ihe.
J & S Botanics ekwusi a nnukwu R & S enweta ego ọ bụla n'afọ nke na-etolite kwa afọ na a 15% ọnụego. Mgbaru ọsọ anyị bụ tinye abụọ ọhụrụ ngwaahịa ọ bụla afọ na, si otú, huu anyị a na-eduga ụlọ ọrụ na osisi mmanụ ụlọ ọrụ na ụwa.